Soo-saareyaasha Shirkadaha Fiyuuska Isku-Xidhan Bolt
Iskuxirayaasha Fiyuusyada Cilindrical
Xiriirada Isku Xidhmada Kaydadka Wareegtada ee Xiriiriyaha Midiyaha
Iskuxiraha Fiyuuska Square Pipe-ka ee Xiriiriyaha Midiyaha
Iskuxirayaasha Fiyuusyada Aan-Buuxiye Cusboonaysiinta
Bolt iskuxirayaasha fiyuusyada ku xiran
Isku xidhka isku xidhka isku xidhka bolt
Bolt Ku Xidhan Wareegtada Kaydadka Noocyada Xiriiriyaha Fiyuus-dhaqso ah ee Ilaalinta Semiconductor
Bolt Isku Xidhan Nooca Pipe Pipe Noocyada Iskuxirka Fiyuus-dhaqso ah Si loo ilaaliyo Semiconductor
Kuwa haya Fiyuusyada Silsilada ah
Saldhigyada Fiyuuska ee Fiyuusyada Iskuxira Fiirooyinka Iyadoo lala Xiriirinayo Midiyaha
Saldhigyada / fiyuusyada Gaarka ah
Qalabka Dabagalka Fiiska
Fiyuus Qaade (Gacan)
Fiisiga Null Line
Bolt Kumbuyuutarka Wareegtada ah ee Isku Xidhan Nooca Fiyuus-dhaqsaha ah ...
Saldhigyada Fiyuusyada Gaarka ah / Haystayaasha
Fiisiga fiidka null
Qaybta kala duwan ee fiyuuska iskudhafka ka samaysan oo ka samaysan xaashiyo qalin ah oo saafi ah ayaa lagu xidhay tuubbada dhalaalaysa ee ka samaysan fiber-ka galaaska epoxy kaas oo u adkaysta kuleylka. Tuubada fiyuusku waxay ka buuxsamaysaa meelaha kiimikada lagu daaweeyo ee nadiifka sare leh sida dhexdhexaadinta daminta qaansoleyda, Labada daraf ee jirka dhalaalaya waxay kuxiran yihiin xirmooyinka (mindida) alxanka dhibic.
Walxaha fiyuus-iskutallaabta ee is-bedbeddelka ka sameysan oo ka samaysan naxaas saafi ah ama qalin lagu xiray kartoon-gacmeed laga sameeyay dhoobada shaqada culus leh ee dhoobada ama dhalada ah. Tuubada fiyuuska oo ay ka buuxsantay ciid quartz nadiif ah oo kiimiko ahaan lagu daweeyay oo ah dhexdhexaad dhexdhexaadinta bakhtiiye. Dot-alxanka walxaha fiyuusku wuxuu ku dhammaadaa boosteejooyinka waxay hubisaa isku xirnaanta korantada ee la isku halleyn karo iyo foomamka geliya xiriirada nooca mindi. Weeraryahanku waxaa laga yaabaa inuu kuxiran yahay iskuxiraha fiyuuska si uu si dhaqso leh ugu howlgeliyo microswitch si uu u siiyo calaamado kala duwan ama uu u gooyo wareegga si toos ah.
warsidaheena todobaadlaha ah
Dhisida 2 #, No.1228, Chenwang Road, Aaga Horumarinta Farsamada, Changxing, Magaalada Huzhou, Gobolka Zhejiang, Shiinaha
xiriiriyeyaal muhiim ah
Xafladii furitaanka Mersen Zhejiang C ...
waxaan abaabulnay dhammaan shaqaalaha si ay ugu safraan Yuliao
Mersen wuxuu ku guuleystey cinwaanka sharafeed ee CSR (co ...
Waxaan qabanay dhoolatus dab ah subaxdii Oc ...